Mareykanka oo digniin culus u diray hay’adaha samafalka ee ka howlagala gudaha Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Mareykanka oo digniin culus u diray hay’adaha samafalka ee ka howlagala gudaha Soomaaliya
Dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday inay dhawaan fullin doonto weerarro ka dhan ah Xarakada Al-shabaab, waxaana ay digniin u direen hay’daha samafalka ee ka howlgala dalka Soomaaliya.
War qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda gaashaandhiga ee Pentagonka Mareykanka ayaa wargelin loogu diray hay’adaha aan dowliga ahayn ee ka shaqeeya Soomaaliya iyo shaqaalahooda, waxaana laga dalbaday inay gudbiyaan goobaha ay ka joogaan dalka Soomaaliya.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dhawaan ay qaadayaan weerarro ka dhan ah Xarakada Al-shabaab, islamarkaana uu digniintan u dirayo hay’adaha samafalka ah, si aan khasaare uga gaarin duqeynta uu qorsheynayo inuu dhawaan qaaddo.
Warbixintaan digniinta ah ayuu Mareykanku ku dalbaday in hay’adaha aan dowliga ahayn ee Soomaaliya ka shaqeeya ay kusoo gudbiyaan goobaha ay xarumaha ku leeyihiin, sida isbitaallada, xeryaha barakacayaasha iyo dhismayaasha ay degganyihiin ee ay shaqaalahooda ku shaqeeyaan.
Wargelintaan oo ku taariikheysan 24-ka bishaan April ayaa dowladda Mareykanka waxay hay’adaha samafalka usoo marisay hay’adda samafalka ah ee USAID, taas oo ah waaxda ka hortagga musiibooyinka ee arrimaha dibadda Mareykanka.
Ugu dambeyn, Pentagonka Mareykanka ayaa sheegay inaysan jirin illaa iyo hadda weerar dhanka cirka ah oo 2017ka uu Mareykanka ka fulliyay Soomaaliya, inkastoo hay’adda BIJ ay shaacisay hal weerar oo uu Mareykanka ka fulliyay Soomaaliya.